Cagta: Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xaanshiyaha 2019 CAN - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »Kubadda cagta: Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato isku-dhiska JS 2019 - JeuneAfrique.com
Isku aadka 2019 CAN, oo ka dhici doona Masar laga bilaabo June 21 ilaa 19 July, ayaa habeenkii Jimcaha lagu qabtay magaalada Qaahira. Iyadoo, on menu, a Morocco-Ivory Coast tantalizing.
Waqtigaan, CAN ayaa bilaabay. Maalintii ugu danbeysay ee isreebreebka, ee la qabtay dhamaadkii bishii Maarso, ayaa loo ogolaaday qaar ka mid ah ciyaartoyda qaaradda, sida Cameroon iyo DR Congo, si looga fogaado inay xagaaga daawadaan ciyaartoyda kale. Waxay sidoo kale siisay Burundi fursad ay ku biiraan Madagascar iyo Mauritania liiska dadka dhalinyarada ah. Kenya, Tansaaniya, Benin, Namibiya iyo Angola ayaa sidoo kale soo noqon doona muddo gaaban, ka dib maqnaansho dheer ama ka badan.
Masar si fiican u adeegto
Hadda waxaan ognahay wax walba oo ku saabsan kan 2019, oo loo dhiibay Masar ka dib Cameroon waxaa laga codsaday in ay diirada saaraan daabacaadda xigala filayaa laba sano. Wareegga koowaad wuxuu socon doonaa laga bilaabo June 21, taariikhda kulanka furitaanka ee u dhexeeya Masar iyo Zimbabwe, 2 July. sixteenths Final bilaabi on July 5 8 si loo soo afjaro on, quarterfinals ee la qorsheeyay iyo 10 17 ee July semi-ka 14, kala soocidda u dhigma ee 17 iyo ... finalka, at Cairo International Stadium, waa dejinta 19 July.
Taariikhda ugu dambeysa ee tartanka flag of Confederation of African Football (CAF) waa ujeeddada dhowr xulasho. Dhowr xul ah ayaa ka soo horjeeda: Masar, Morocco, Nigeria, Senegal, iyo Tunisia, kuwaas oo ahaa shan ka mid ah wakiilada qaaradda Afrika ee sannadkii hore, iyadoo natiijada cajiibka ah ee aan ognahay.
Qeybtan shanta sano ee ugu weyn ayaa muuqda Cameroon, oo ku guuleysatay horyaalka Afrika, laakiin caqabaddooda cakiran, Algeria, Ghana, Côte d'Ivoire, iyo in yar oo dib loogu soo celiyo DR Congo, Guinea, Mali iyo Koonfur Afrika.
Xayawaanku wuxuu kooxo isku mid ah ku hubinayey hub aad u weyn. Dhanka kale, dhexda u dhexeeya Morocco iyo Ivory Coast, oo la qorsheeyey June 28 ee Qaahira maalinta labaad, ayaa isha ku haya. Gaar ahaan taniyo Koonfur Afrika sidoo kale waa qayb ka mid ah wax badan, kor u qaadida heerka. Waxay noqon doontaa maalin ka dib markii Senegal-Algeria ay sidoo kale qorsheysey Qaahira, laakiin marxalad kale.
Inaad akhrido >> Garoomada, jawiga, cimilada ... waxa laga filayo CANUMX ee Masar?
Waxaan sidoo kale u baahan doontaa in ay dareen ku saabsan Cameroon-Ghana mar walba heer sare filayay, jir Afrika classic, album la soo dhaafay, kuwaas oo, inta lagu guda jiro 2017 CAN ee Gabon ayaa ay guushu ku ah Cameroon jeestay of Hugo Broos (2-0), semi-finalka. Tani waxay noqon doontaa June 29 iyo ciyaarta go'aan ka gaari waayay taasoo ah Cameroon ama Ghana rakibi doonaa kantaroolida Group F. Laakiin qaab fiican sidoo kale laga yaabaa in la siiyo by doorashada yar.
Wareeggan koowaad wuxuu si toos ah u dhadhamin doonaa casriga. Doorashooyinka qaarkood waxay ku kulmi doonaan markii ugu horeysay ee dhulka Fircooniga ah. Qaar kale waxay ka faa'iideysan doonaan xagaaga xagaaga si ay isugu dayaan inay ka aargudaan xasilooni waayeelnimo ah, in dadka waayeelka ah ay ka taxadaraan xusuusinta kuwa dhaxal-dhalinta leh. Waxaa jiri doona cajaa'ibyo, kuwa yaryar kuwaas oo doonaya doorashooyin waawayn oo waaweyn oo u gudbi doona dhibcaha marka ugu horeysa ka hor inta aysan helin qaab ciyaareedkooda tartanka tartanka. Kooxaha sida Mauritania, Madagascar, Uganda ama Benin ayaa laga yaabaa inay sheegaan.
GROUP A : Masar, DR Congo, Uganda, Zimbabwe
GROUP B : Nigeria, Guinea, Madagascar, Burundi
GROUP C : Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania
GROUP D : Morocco, Ivory Coast, Koonfur Afrika, Namibiya
GROUP E : Tunisia, Mali, Mauritania, Angola
GROUP F : Cameroon, Ghana, Benin, Guinea-Bissau
Comment James Holzhauer a-t-il transformé ‘Jeopardy!’ En son propre A.T.M.? Nous lui avons demandé – New York Times